လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်များ - For her Myanmar
by Wynee Myanmar
၁။ မေးမြန်းဖို့ သတ္တိရှိပါစေ။
ဒလိုင်းလားမား ပြောသလိုပေါ့၊ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အဆင်သင့် လုပ်ယူပြီးသားအရာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အရာပါ။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ် သဘောမတွေ့တာတွေ၊ အခက်အခဲကြုံနေရတာမျိုးတွေဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သေချာပြောဆိုကြည့်ပြီး အဆင်ပြေ တိုးတက်မှုရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖွင့်ဟဆွေးနွေးတာမျိုးက အသားကျသွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သဘောအကျဆုံး အလုပ်တစ်ခုတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ…
၂။ ကိုယ့်အလုပ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာဖွေပါ။
ကိုယ့်အလုပ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီး တခြားသူတွေအပေါ် ကိုယ့်အလုပ်ရဲ့ အရေးပါ သက်ရောက်မှုကို သိရှိလက်ခံထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမိုပျော်ရွှင်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု နဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်လည်း ပိုကောင်းကြပါတယ်။
Related Article >>> ဘွဲ့မရခင်မှာ အလုပ်တစ်ခုရနေဖို့ ကျောင်းတက်နေကတည်းက အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ?
၃။ ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ဝန်းကျင် တစ်ခု ဖန်တီးပါ။
ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို သီးသန့်ပုံစံ ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ပန်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေထားပါ။ ပန်းတွေက စိတ်ကို လန်းဆန်းစေနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု၊ စွမ်းရည်နဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထားရှိပါ။
တစ်နေ့တာအတွင်း ကိုယ်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သတ်မှတ်ထားရှိပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပါ။ ‘လုပ်ဆောင်ရန်များ’ ဆိုပြီး စာရင်းလေး လုပ်ထားလို့လည်း ရပြီး တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားတိုင်း အမှတ်လေးတွေ ခြစ်သွားရုံပဲ စိတ်ကျေနပ်စရာပေါ့။ အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြီးသွားတာ မြင်ရတာလည်း ပျော်စရာပဲလေ…
၅။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
အလုပ်လုပ်ရက်တွေမှာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက လူတွေကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေကာ အကောင်းမြင်မှု ဖြစ်စေတယ်လို့ တွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ အလုပ်မသွားခင် နံနက် သို့မဟုတ် နေ့လယ်စာ မစားခင်မှာ ခဏလောက် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်မှု အသီးသီး ဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ..
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Wynee Myanmar Organisation အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရှငျဖို့ ဒီလို ရိုးရှငျးတဲ့ အခကျြလေးတှပေဲ လိုတယျဆိုရငျ…
၁။ မေးမွနျးဖို့ သတ်တိရှိပါစေ။
ဒလိုငျးလားမား ပွောသလိုပေါ့၊ ပြျောရှငျမှုဆိုတာ အဆငျသငျ့ လုပျယူပွီးသားအရာ မဟုတျဘူး၊ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျရပျတှကေပဲ အဆုံးအဖွတျပေးတဲ့ အရာပါ။ အလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ကိုယျ သဘောမတှတေ့ာတှေ၊ အခကျအခဲကွုံနရေတာမြိုးတှဆေိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့အဖှဲ့အစညျးနဲ့ သခြောပွောဆိုကွညျ့ပွီး အဆငျပွေ တိုးတကျမှုရအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို ဖှငျ့ဟဆှေးနှေးတာမြိုးက အသားကသြှားပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ သဘောအကဆြုံး အလုပျတဈခုတောငျ ဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ…
၂။ ကိုယျ့အလုပျရဲ့ အဓိပ်ပာယျကို ရှာဖှပေါ။
ကိုယျ့အလုပျရဲ့ အဓိပ်ပာယျကိုနားလညျပွီး တခွားသူတှအေပျေါ ကိုယျ့အလုပျရဲ့ အရေးပါ သကျရောကျမှုကို သိရှိလကျခံထားတဲ့ ဝနျထမျးတှဟော လုပျငနျးခှငျမှာ ပိုမိုပြျောရှငျပွီး ပေါငျးသငျးဆကျဆံမှု နဲ့ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျလညျး ပိုကောငျးကွပါတယျ။
Related Article >>> ဘှဲ့မရခငျမှာ အလုပျတဈခုရနဖေို့ ကြောငျးတကျနကေတညျးက အခြိနျကို ဘယျလိုအသုံးခမြလဲ?
၃။ ကောငျးမှနျတဲ့ အလုပျဝနျးကငျြ တဈခု ဖနျတီးပါ။
ကိုယျအလုပျလုပျတဲ့နရောကို သီးသနျ့ပုံစံ ဖွဈအောငျ ကိုယျ့ရဲ့ အလုပျစားပှဲပျေါမှာ ပနျးတှေ၊ ဓာတျပုံတှထေားပါ။ ပနျးတှကေ စိတျကို လနျးဆနျးစနေိုငျပွီး ပြျောရှငျမှု၊ စှမျးရညျနဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုတှကေို တိုးမွငျ့စနေိုငျပါတယျ။
၄။ ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျထားရှိပါ။
တဈနတေ့ာအတှငျး ကိုယျပွီးအောငျလုပျရမယျ့ အလုပျတှေ၊ စိနျချေါမှုတှကေို သတျမှတျထားရှိပွီး ကိုယျ့ရဲ့ အလုပျလုပျခငျြစိတျကို မွှငျ့တငျပါ။ ‘လုပျဆောငျရနျမြား’ ဆိုပွီး စာရငျးလေး လုပျထားလို့လညျး ရပွီး တဈခုလုပျပွီးသှားတိုငျး အမှတျလေးတှေ ခွဈသှားရုံပဲ စိတျကနြေပျစရာပေါ့။ အလုပျတှေ တဈခုပွီးတဈခု ပွီးသှားတာ မွငျရတာလညျး ပြျောစရာပဲလေ…
၅။ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ။
အလုပျလုပျရကျတှမှော ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက လူတှကေို စှမျးဆောငျရညျမွငျ့စပွေီး စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးစကော အကောငျးမွငျမှု ဖွဈစတေယျလို့ တှရှေိ့ထားကွပါတယျ။ အလုပျမသှားခငျ နံနကျ သို့မဟုတျ နလေ့ယျစာ မစားခငျမှာ ခဏလောကျ အပွေးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျကွညျ့ပါ။
လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရှငျပွီး အောငျမွငျမှု အသီးသီး ဆှတျခူးရရှိနိုငျကွပါစေ ယောငျးတို့ရေ..
အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့လညျး အောကျတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
ဤဆောငျးပါးအတှကျ ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Wynee Myanmar Organisation အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
(1) Have the courage to ask
“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama. The parts of your job that you may dislike or find difficult can be improved through effective communication within your team – it could even end up being the part you enjoy most!
(2) Find your job’s purpose
Employees who understand their job’s purpose and realise the positive impact their work is having on others are happier, more engaged and more productive in the workplace.
(3) Createapositive environment
Place flowers and photographs on your desk to personalise your working area. Flowers are the perfect pick-me-up and are proven to increase energy, happiness and enthusiasm.
(4) Set goals
Set yourself personal goals and challenges throughout the day to keep yourself motivated,a‘to do’ list isagood way of doing this, plus you can tick things off as you go – which isalittle bit ofatreat!
Exercising on workdays is proven to make people more productive, less stressed and positive. Maybeashort run in the morning before work or at lunch.
Tags: Career, Enjoy, environment, Job, secrets, tips, work, Wynee
လေဆာကို အသုံးပြုပြီး အမြင်ပါဝါ လျော့နည်းစေတာက အန္တရာယ် ကင်းရဲ့လား?
ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ
Wynee Myanmar November 26, 2018